नियमित सेक्स गर्नुस दिमागको कोष बचाउनुस
झापा । तपाई हामीमध्ये धेरै जनालाई थाहा भएकै कुरा हो ढल्किदो उमेरसँगै दिमागका कोषहरु पनि निष्क्रिय हुँदै र हराउँदै जान्छन् । ३५ वर्ष पुगेपछि हरेक दिन हामीले ७ हजार दिमागका कोषहरु गुमाउन थाल्छौं । सायद यो सुन्दा पनि जो कोहीलाई उदेक लाग्न सक्छ । तर खुसीको खबर पनि छ । नियमित रुपमा यौन सम्पर्क गर्नेको […]
थाहा छ सेक्स कसरी गर्ने ?
नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिँदैन । यौनका बारेमा जति चर्चा गर्दा या त त्यसलाई असाध्यै जटिल बनाइन्छ, या अति नै हलुका । फलस्वरुप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि अतिरञ्जनको विषय । फ्रायडले धेरैअघि मानिसका सबैजसो क्रिया यौनमा आधारित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिसक्दा पनि फ्रायड पढेका नेपाली बौद्धिक […]
हामी सेक्सलाई अश्लिल भनेर यस विषयमा कुरै गर्न चाहदैनो । भन्छौ – यो त छाडा कुरा हो । यद्यपी यो प्राकृतिक विषय हो । यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरै छैन । सेक्स सम्वन्धीका विषयमा चासो राख्नु र जानकारी लिनु राम्रो हो । पहिलो पटकको सेक्सको बारेमा मानिसहरुमा धेरै प्रकारको कौतुहल र जिज्ञासा उत्पन्न हुने गर्दछ । जिज्ञासासँगै […]
एजेन्सी । कयौं पटक यस्तो भएको हुन्छ आफू जोशमा आएर कसैलाई आफ्नो ठानेर भविष्यको लागि केही नसोचेर अर्कालाई आफ्नो मनको कुरा बताइदिने गरिन्छ । यदि अगाडी गएर आफ्नो गल्तीको महसुश त्यतिखेर गरिन्छ जब आफ्नो राजको कुरा अर्कोले जानेबुझेर मौकाको फाईदा उठाउँछ । यसपछि सबैलाई धेरै प्रकारका चिन्ताहरु को सामना गर्नुपर्छ । यदि तपाईले आफ्नो भलो […]
सच्चा प्रेम दर्शाउन किस गर्ने ७ तरिका
एजेन्सी । प्रेम जनाउने र आफ्नो सत्य प्रेम महशुस गराउने सबै भन्दा असरदार तरिका किस हो । किस गर्न पनि एउटा कला हो । तपाई यसमा जति सक्रिय हुनुसक्नु हुन्छ त्यति नै असरदार तरिकाले पार्टनरलाई प्रेम पनि महशुस हुनसक्छ । यसको लागि किसका अलग अलग तरिका प्रयोग गर्नसक्नु हुन्छ । पढ्नुस् ७ अलग अलग किसका […]
एजेन्सी । सेक्स हतारमा गर्ने गर्नु हुन्छ कि क्या हो ? सेक्स गर्दा तपाई को पार्टनर कसरि संतुष्टी दिनु हुन्छ ?येस्तै केहि प्रश्न को उत्तरहरु छन् ताकी तपाईं को सेक्स जीवन अझै सेक्समय होस् । लामो समय सेक्स नहुनु या शीघ्र स्खलन एउटा आम समस्या हुन् । तल उल्लेखित केहि सुझावहरु तपाईं को लागि फलदायी हुन सक्छन । […]
सेक्सका बेला युवतीहरु के सोच्छन् ? यस्तो छ नयाँ खुलासा
एजेन्सी । सेक्समा लिप्त भएका बेला युवतीहरु के सोच्छन् होला ? मानिसको यौन चाहनाका बारेमा एउटा नयाँ सर्वेक्षण सार्वजनिक भएको छ । यो सर्वेक्षण निकै अनौठो खालको छ । बेलायतमा भर्खरै सकिएको सर्वेक्षण अनुसार, ५० प्रतिशत महिलाहरू यौनका समय पूरा नग्न हुन चाहँदैनन् । यौनका समय कुनै न कुनै कपडा लगाउनु नै पर्ने तथ्य यस […]
नेपाल आइडलको टप–११ मा झापाकी दृष्टिविहीन मेनुका, भोट दिन आग्रह
बिर्तामोड । झापा हल्दिबारी गाउँपालिका वडा नं. ४ जलथल निवासी मेनुका पौडेलले आफूलाई नेपाल आइडलको उपाधि जिताउन आग्रह गरेकी छिन् । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको नेपाल आइडलको टप–११ छनौट भएकी उनले उक्त प्रतियोगितामा नेपाल आइडलको उपाधि जिताउन मोबाइलको माध्यमद्वारा एसएमएस भोटिङ गर्न सबैसँग आग्रह गरेकी छिन् । झापा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै अघि बढेकी मेनुकाले आफूलाई टप–१ […]
सेक्स नगर्दा आउने ६ समस्या, तपाईलाई त भएको छैन ?
एजेन्सी । दैनिक जीवनमा अन्य चीजको जरुरत भए जस्तै सेक्सको पनि मानिसलाई जरुरत हुन्छ । खास गरेर हाम्रो समाजमा अझैपनि यसको बारेमा खुलेर कुरा गर्न हिच्काचाउँछन् । तर स्वस्थ रहनको लागि यो पनि अनिवार्य छ । नियमित सम्बन्ध बनाउनाले शरिरलाई धेरै किसिमका फाईदाहरु हुन्छन् । यदि तपाई सम्बन्ध बनाउन छोड्नु हुन्छ भने यसले तपाईको शरिरमा […]
एजेन्सी । महिलाको वक्षस्थल पुरुषका लागि आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ । यसले महिलाको सुन्दरतामा पनि निखार ल्याएको हुन्छ । त्यहीँ कारण वक्षस्थललाई सकेसम्म बढि कामूक, कसिला तथा ठूला बनाउन महिलाहरुले विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन् पछिल्ला दिनमा यसका लागि विकसित देशमा स्तन प्रत्यारोपण लगायतका पद्धति समेत निकै चल्तीमा छन् । हामीले यहाँ वक्षस्थल सम्बन्धि केही रोचक तथ्य […]